Semalt बाट प्रोग्रामरहरूको लागि वेब स्क्रैपिंग एक्सटेन्सन
यदि तपाईं पाइजोनसँग वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्नुहुन्छ, urllib अनुरोधहरू. सेलेनियम एक व्यापक पाइजोन ढाँचा हो जसले विभिन्न वेब पेजहरु लाई स्क्रैप गर्न को लागी बोट्स प्रयोग गर्दछ. यी सबै सेवाहरूले विश्वसनीय परिणामहरू प्रदान गर्दैनन्; त्यसैले, तपाईंले आफ्नो काम पूरा गर्न निम्न विस्तार प्रयास गर्नुपर्छ:
1. डेटा स्क्रैपर:
यो एक लोकप्रिय क्रोम एक्सटेन्सन हो; डेटा स्क्रैपर डेटा दुवै आधारभूत र उन्नत वेब पृष्ठबाट स्क्रैप गर्दछ. प्रोग्रामरहरू र क्याडरहरूले ठूलो संख्यामा गतिशील साइटहरू, सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरू, यात्रा पोर्टलहरू र समाचार आउटलेटहरूलाई लक्षित गर्न सक्छन्. डेटा एकत्रित र तपाईंको निर्देशन अनुसार स्क्रैप गरिएको छ, र परिणाम CSV, JSON, र XLS ढाँचामा बचत गरिएका छन्।. तपाइँले आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइटलाई सूची वा तालिकाहरूको रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. डेटा स्क्रैपर प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छैन तर गैर प्रोग्रामरहरू, विद्यार्थीहरू, फ्रान्सेन्सरहरू, र विद्वानहरूको लागि पनि राम्रो छ।. यसले एकैसाथ धेरै स्क्रैपिंग कार्य गर्दछ र तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ.
2. वेब स्क्रैपर:
यो अर्को क्रोम एक्सटेन्सन हो; वेब स्क्रैपमा प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र हामीलाई साइटमैप सजिलै सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ. यो एक्स्टेन्सनको साथ, तपाईं विभिन्न वेब पेजहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण वा आंशिक साइट स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. वेब स्क्रैपर दुवै नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछ र प्रोग्रामरहरू, वेबमास्टर्स र स्टार्टअपहरूका लागि उपयुक्त छ. तपाईंको डाटा स्क्रैप गर्न र यसलाई तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न केहि सेकेन्ड लाग्छ.
यो सबैभन्दा प्रसिद्ध फायरफक्स एक्स्टेन्सन हो। स्क्रैपर एक विश्वसनीय र शक्तिशाली स्क्रिन स्क्रैपिंग र डेटा खनन सेवा हो. यसमा प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र अनलाइन अनलाईन तालिकाहरू र सूचीबाट डाटा निकाल्छ. डेटा त्यसपछि पढ्नयोग्य र स्केलेबल ढाँचामा रूपान्तरण गरिएको छ. यो सेवा प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र XPath र JQuery प्रयोग गरी वेब सामग्री निकाल्दछ. हामी डेटा प्रतिलिपि गर्न वा निर्यात गर्न Google Docs, XSL र JSON फाइलहरूमा. स्क्रैपरको इन्फेसर र विशेषताहरू आयात गर्न जस्तै छन्. io.
यो क्रोम एक्सटेन्सन हो र सबैभन्दा शक्तिशाली (2 9) वेब स्क्रैप सेवाहरू मध्ये एक हो।. यसले कुकीहरू, जाभास्क्रिप्ट, पुनर्निर्देशितहरू, र AJAX दुवै स्थिर र गतिशील साइटहरूलाई स्यान्डल गर्दछ. अक्टोपारले अहिले सम्म2मिलियन भन्दा बढी वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्ने दाबी गरेको छ. तपाईं बहुविध कार्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र अक्टोपारेले तिनीहरूलाई सबै साथसाथै सम्बोधन गर्नेछ, तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ. सबै जानकारी अनलाइन देखिने छ; तपाइँले केहि क्लिकहरूसँग इच्छित फाइलहरू तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
उद्यम र प्रोग्रामरहरूको लागि यो उपयुक्त छ; Parsehub केवल फायरफक्स एक्सटेन्सन मात्र होइन तर एकदम राम्रो वेब स्क्रैपिंग र उपकरण क्रल गर्दै पनि. पार्स हब रिडिरेक्ट्स र कुकीजहरूको साथ AJAX टेक्नोलोजी र स्क्रैप साइटहरू प्रयोग गर्दछ. यसले पढ्न र विभिन्न वेब कागजातहरू प्रासंगिक जानकारीमा मिनेटको कुरामा परिवर्तन गर्न सक्छ. एकपटक डाउनलोड र सक्रिय भएपछि, पार्सहेबले धेरै डाटा स्क्रैपिंग कार्यहरू एकै समयमा. यसको डेस्कटप अनुप्रयोग मैक ओएस एक्स, लिनक्स, र विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयुक्त छ. यसको नि: शुल्क संस्करण पन्द्रह सम्म परियोजनाहरु लाई स्क्रैपिंग गर्दछ, र भुक्तान गरिएको योजनाले हामिलाई एक समय मा 50 देखि अधिक परियोजनाहरु लाई संभालने को लागि अनुमति दिन्छ Source .